Ma fiicnaan laheyd haddii Wax Soo Saarka Gudaha lagu doorbido Nidaamka Tareenka Auctions Gawaarida | RayHaber | raillynews
HometareenkaMa fiicnaan laheyd haddii Wax Soo Saarka Gudaha lagu doorbido Hindise Gawaarida Nidaamka Tareenka
08 / 01 / 2020 tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY, taraamka
Haddii soo-saarka gudaha laga doorbidayo hindisooyinka iibka nidaamka tareenka, miyaanay fiicnayn inay sidan tahay?
1. Bishii hore qandaraaska loo yaqaan Konya Rail Nidaamka metro Metro iyo Gaadiidka metro waxaa la siiyay shirkadda CRRC ee Shiinaha 1.2 milyan Euro (7 bilyan 900 milyan oo TL).
Sanadkii la soo dhaafay, 272 gawaarida nidaamka tareenka dhulka lagu dhigo oo ku yaal magaalada Istanbul ayaa waxaa la siiyay shirkadda CRRC ee Shiinaha oo loogu talagalay 2 bilyan 448 milyan TL.
Miyaanan qorsheynin in qorshaha 11aad ee horumarinta ee 2023 80% ee nidaamyada tareenka ay noqon doonaan tabaruc gudaha ah iyo sumad qaran?
Iyada oo la raacayo qorshaheena horumarineed, mashaariicdaas waxaa lasiiyay hay'ad qaran oo ka kooban shirkado maal gasha soona saara wax soo saarka dalkeena sida DURMAZLAR, BOZANKAYA, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, ASELSAN, BMC, ASAŞ, iyo TÜDEMSAŞ. Miyeysan fiicnaan laheyn haddii waddankeenna, warshadaha waddanku guuleystaan, oo lacagteenna ajnabiga ah lagu daayo waddankeenna sababtuna tahay 15.000 injineerro, farsamo yaqaanno iyo shaqaale?
2. Dawladda hoose eeAnkara, waagii hore, qiyaastii 3 bilyan TL oo loogu talagalay Ankapark, 51 milyan TL oo loogu talagalay Şentepe Teleferik, farshaxanno kala duwan, irdaha laga galo, munaaradaha, bisadaha, dinosaur, oo ay kujirto lacag dhan 439 milyan TL ayaa lagu kharash gareeyay 3.5 bilyan TL.
Tusaale ahaan, haddii dhibaatooyinka gaadiidku, oo ah dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee caasimada Ankara, lagu xallin lahaa lacagtan lagu kharash gareeyey,
Haddii khadka Khadka Diyaaradaha ee Kızılay-Airport iyo Kızılay-Etlik City Hospital Metro la dhisi lahaa, 1800 basas ama 1000 gaadiid nidaamka metro ayaa lagu iibsan karaa lacagta la soo iibsaday. Miyaanay fiic fiicnayn hadii dhibaatada gaadiidkeena caasimada la xalin lahaa hadii labada bas la iibsado, khadka tareenka iyo gawaarida metro la qorsheeyo loona wada dhiso si waafaqsan baahida Ankara? Intaa waxaa sii dheer, inta aan ku leenahay magaalada Ankara shirkad maxalli ah iyo mid qaran, kuwaas oo sameeya taraam iyo baabuurta metro leh xarumaha maxalliga ah iyo kuwa qaran.
3.Haddii lagu soo rogi lahaa shaambadda khasabka ah muwaadiniinta dibedda u dhoofaya, haddii lagu dari lahaa tigidhada diyaaradda, miyeysan fiicnayn haddii aysan lumin waqti aan loo baahnayn maxaa yeelay ma heli doonaan shaabad madaafiic madaarradaha diyaaradaha?
4. Miyayna hagaagsanayn haddii carruurteennu dugsiga aadeen iyo shaqaalaheennu ay shaqada ku shaqeeyaan iftiinka oo aan mugdi ahayn xitaa haddii saacadaha dib looga soo celiyo hal saac?
5. Waxaa jira guud ahaan 56 km of khadadka dhulka hoostiisa ee Ankara, ee xarunta garoonka diyaaradaha Turkiga ee non-metro. Waxaa jira khadka 4km oo dhismihiisa socda oo la qorsheeyay oo kaliya sida M35 Kecioren - Kizilay - khadka madaarka. Maanta, cusbitaalka magaalada Etlik, Ankara ayaa la soo gabagabeynayaa. Laakiin wali ma jiro xariiq metro. Gaar ahaan garoonka diyaaradaha, cusbitaalada cusub ee Etlik magaalada ayaa la furi doonaa, jaamacado, aag warshado ah, xarumo ganacsi iyo horumarinta goobo cusub, sida cufnaanta dadka iyo kororka deg degga ah ee ay kujiraan waqti xawaare RAYLI SYSTEMS (Metro, Tram) iyo nidaamyadan ayaa lagu dhex dari doonaa wadajirka Miyaanay hagaagsaneynayn in khadadka gaadiidka la qorsheeyay oo la dhisay?
Tababarka Wax-soo-saarida gudaha ee Gaadiidka Nidaamka Tareenka
Nidaamka Isgaadhsiinta Qaybta Isgaarsiinta Cabirka Prysmian Cable
SAMULAŞ Waxay ugu yeeraysaa 'Wax soo Saarka Gudaha' ee Qeybaha Nidaamka Tareenka
Dhacdooyinka Tareenka: Waayo Rail Transport Sector ee Turkey iyo Warshadaha Turkish ah ...
BozankayaSaxaafadda Button ee iibinta Gawaarida Wax soo Saarka Guryaha ee Latin America
Dhaqdhaqaaqa Wax-soosaarka Gudaha ee Nidaamka Tareenka
Guddiga Farsamada Kooxda Farsamaynta Shaqada ee Hantida Wax Soosaarista
Kızılay-Etlik City Hospital Subway Line
Khadka Tareenka ee K Airportzılay-Airport
Gawaarida Konya Metro
Khadka tareenka ee Konya
Gawaarida Gawaarida Iibsiga
jilicsanaanta baabuurta tareenka